TrustPort USB Antivirus.. ~ မိုးညိုသား
TrustPort USB Antivirus..
1:40 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ) No comments
kaspersky ထက် ဈေးကြီးတဲ့ TrustPort USB Antivirus 2012 12.0.0.4860 ပါ
6:59 PM ညီနေမင်း 17 comments
အခု တင်ပေးမယ့် TrustPort USB Antivirus 2012 ကတော့ online မှာ kaspersky ထက်တောင် ဈေးကြီးပါသေးတယ်. 1 PC ကို EUR 29.95 တောင် ပေးရပါတယ်. ဈေးကတော့ တော်တော်ကြီးတယ်. ကျွန်တော် ရရခြင်းကို တင်ပေးလိုက်တာပါ. ကီးဖိုင်ကို သီးသန့်တင်ပေးထားပါတယ်. software ကိုတော့ သူ့မူရင်းဆိုက်ကနေ Direct link ကနေသာ Download လုပ်လို့ရအောင် Direct link ထည့်ပေးထားပါတယ်. ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် စမ်းပြီးတော့မှ သီးသန့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဒီလောက် ဈေးကြီးပုံပေါက်ရင်တော့ အားသာချက်တွေတော့ တော်တော်များမယ်ထင်တယ်. . သင်္ကြန်တွင်း ရဟန်းဝတ်မလို့ပါပဲ. ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုထားတာတွေ အရမ်းများနေတဲ့အတွက် ၀ဘ်ဆိုက်ဖက်ကို ဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်. ဒါကလဲ ကုသိုလ်ပဲမို့လို့ ဒီဖက်က အများကပေးတဲ့ ကုသိုလ်ကိုပဲ အစားထိုးပြီး ယူလိုက်ပါတယ်. ဒီနှစ်လဲ သင်္ကြန်တွင်း အပြင်ဖက်တောင် မထွက်ဖြစ်ပါဘူး. ကဲအောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါဦး